အော် ပ ရေ တာ ဘလက် (2) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » အော် ပ ရေ တာ ဘလက် (2)	50
အော် ပ ရေ တာ ဘလက် (2)
Posted by black chaw on Mar 10, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Myanmar Gazette, News, Thakhin: CJ Only | 50 comments
မျှော် မျှော် မ မျှော်မျှော်ဗျာ…။
မျှော် တယ်လို့ မှတ်လိုက်…။
တာဝန်ခံအော်ပရေတာကြီး ဘလက်ချောပါ ခင်ဗျာ…ခင်ဗျ…။
ဟုတ်ကဲ့ အော်…စင်္ကာပူကတောင် ဆက်တာပေါ့နော်…။
အော် ဇီဇီ ခင်ဇော်…။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဇီဇီ ခင်ဇော်ရေ…။
တင်ဇာမော်တစ်ယောက် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေတဲ့ သတင်းလားခင်ဗျ…။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ကတည်းက ရောက်တာပါဗျာ…။
အော် သူ့ အမေ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေလို့ ပြန်လာနေပေးတာတဲ့ ခင်ဗျ…။
သူ့ ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု…။
အော်…ဟိုတစ်ခါ ပြန်လာတုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ Live Show ကို စီးရီးအဖြစ် ထုတ်မယ်တဲ့ခင်ဗျ…။
နောက်ကျတဲ့ လက်ဆောင် လို့ နာမည်ပေးထားတယ်တဲ့ ခင်ဗျ…။
ဟုတ်ကဲ့…တင်ဇာမော် ကို အမြဲတမ်း အားပေးနေပါတယ် ပေါ့နော်…။
ဒီတစ်ခါ တွေ့ရင် ပြောပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ…
ကျေးဇူးပါ ဇီဇီ ခင်ဇော် ရေ…။
ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာဂဇက် ကပါခင်ဗျာ…။
နာမည်က ကိုကျောက်ခဲ ပေါ့နော်…။
ဟုတ်ကဲ့…ဘာများအရေးတကြီး ပြောစရာရှိလို့လဲ ခင်ဗျ…။
အော် နာရေးကူညီမှု အသင်း ဥက္ကဌကြီး ဦးကျော်သူ သတင်းလားခင်ဗျ…။
ဦးကျော်သူ ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်တော့မယ်လို့ နားစွန်နားဖျားကြားထားရပါတယ် ခင်ဗျာ…။
အော် မိတ်ဆွေကြီးက ကျော်သူ့ ပရိသတ်ပေါ့နော်…။
ကျော်သူကို သိတ်ကြိုက်လို့ ကျောက်ခဲလို့ နာမည်မှည့်ထားတာပေါ့နော်…။
ကျော် နဲ့ ကျောက် ဘယ်လိုများ ဆွဲစေ့ထားတာလဲ ခင်ဗျာ…။
အော် သဝေထိုး ကကြီး ယပင့် ခြင်း တူတယ်ပေါ့နော်…။
အဲဒီသတင်းက ဒီလိုရှိပါတယ် အစ်ကိုကြီး ကိုကျောက်ခဲရေ…။
ကျော်သူ ပြန်လည်ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်က ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးခင်ဗျ…။
အော်…အစ်မကြီးက အင်္ဂလန်နိုင်ငံကတောင် ဆက်တာပေါ့နော်…။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း One Lady Show သတင်းလေး သိချင်တာပေါ့နော်…။
အော်…အစ်မကြီး နာမည်လေး သိခွင့်ရမလားခင်ဗျာ…။
အော်…မခင်လတ် ဟုတ်ကဲ့ပါ မခင်လတ်ရေ…။
၀ိုင်းစု က သူ့ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး One Lady Show ကို
Action & 10 Years လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ…။
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ည Myanmar Event Park မှာ ကျင်းပသွားမယ်တဲ့ ခင်ဗျ…။
အော်…အစ်မကြီးက ၀ိုင်းစု ရဲ့ ချစ်ဦးပုံပြင် သီချင်းလေး ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်…။
အော်…အဲ့ သီချင်းက အစ်မကြီးနဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်…။
အချစ်ဦးဆိုတာမျိုးက မြေးဦး ရတဲ့အထိ မမေ့နိုင်ကြဘူးလို့ ဆို တဲ့ စကားလည်း အရှိသားကို ခင်ဗျ…။
အခုလို အင်္ဂလန်ကတောင် ဖုန်းဆက်တာအတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မကြီးရေ…။
ဟုတ်ပါတယ် အော်ပရေတာလေး ကိုကို ဘလက်ချောပါ ညီမငေးရယ်…။
မန္တလေးက ဆက်တာ…အော် မိပုခ်ျလား…။
မတ်လ ၃ ရက်နေ့ကပေါ့နော်…။ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပေါ့နော်…။
သီချင်းစုစုပေါင်း ၃၄ ပုဒ် ဆိုသွားတယ်ပေ့ါနော်…။
ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ ခင်ဗျ…။
အော်…ပရိသတ် နဲ့ မွန်းအောင် တစ်သားတည်း ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်…။
ကိုငှက် ရေးတဲ့ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ သီချင်းလေးကော ထည့်ဆိုသွားသေးလားဗျ…။
ဆိုသွားတာ ကြက်သီးတွေတောင် ထတယ်ပေါ့နော်…။
အခုချက်ချင်းပဲ သေနတ်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်…။
ဒါနဲ့ ဘယ်အဖွဲ့ တီးပေးသလဲ ခင်ဗျ…။
အော် The Rhythm Music Band ပေါ့နော်…။
ရှိုးပွဲ သတင်းလေး လှမ်းပြောပြတာ ကျေးဇူးပါ မပုခ်ျရေ…။
ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာ ဂဇက် ကပါခင်ဗျာ…။
လက်ဖက်ရည် အတူ မသောက်ရတာတောင် တစ်လလောက်ရှိပြီဗျာ…။
အော်…အမြန်လမ်းမှာ ယဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပြန်ပြီလားခင်ဗျ…။
မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင် ယဉ်လိုင်း က Express ကားကြီးတစ်စီးကပေါ့နော်…။
Light Truck ကားတစ်စီးကို ကျော်တက်ရင်း တိုက်မိသွားတာပေါ့နော်…။
သံဃာတော် ငါးပါး ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်ပေါ့နော်…။
ဟုတ်ကဲ့…။ အမြန်လမ်း သတင်းကတော့ ကြားလိုက်ရင်
ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့…အမြန်လမ်းကို အသုံးပြုကြမယ့် သူတွေအနေနဲ့
ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်း မောင်းကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျ…။
အခုလို သတင်းလေး လှမ်းပြောပေးတာလည်း ကျေးဇူးပါ ကိုပါကြီးရေ။
ဘာများထူးလို့ ဖုန်းဆက်တာလဲ ခင်ဗျ…။
အော်…ဗေလုဝကြီးက ဦးလှဆွေကို တရားစွဲတော့မယ်ပေါ့နော်…။
အော်…ဗေလုဝ က မအေတွေ နှမတွေနဲ့ ကိုင်တုတ်တာလားခင်ဗျာ…။
ဆဲလည်း ဆဲချင်စရာပဲလေ မွသဲရယ်…။
စောင်း မှန်း နတ်သားမှန်း မသိပဲ သူများသွားစော်ကားတော့
အဆဲခံရတာတောင် နည်းသေးလို့ ပြောရမှာပဲဗျာ…။
အော်ပရေတာလေး ဘလက်ချောက ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း
Kaung Kin Pyar says: တင်ဇာမော်ရဲ့ နောက်ကျတဲ့ လက်ဆောင် ကလဲ အားပေးသူ များမှာပဲ
ဦးကျော်သူရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကလဲ ၀က်ဝက်ကွဲ အောင်ပွဲခံမှာပဲ
၀ိုင်းစုရဲ့ One Lady Show ကလဲ လက်မှတ်တွေ ရောင်းမလောက် ဖြစ်ဦးမယ်…။
အမြန်လမ်း သတင်းအတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ….
ပထမ ဆုံး ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေး အတွက်
နောက်လည်း လာ အားပေးပါဦးနော်…။
ဗုံဗုံ says: သို့..ချစ်လှစွာသော..
ပိုက်ချံလေးချေးဘာလား…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: နာမယ်ပေး ကပွန်းတတ်ကော.. ဒါမျိုးတွေစောင့်ဖတ်ပေးရလို့ကော တစ်ဝိုင်းတော့ ပေးသင့်ဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
တစ်ဝိုင်းမက တောင် တန်ပါတယ်…။
Facebook ကြီးက ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးဖြစ်နေလို့တဲ့…။
Wow says: fb မာ ရူးကျောင်မူးကျောင်ဂေါက်တောက်တောက်တွေမရှိတော့ ပျင်းဒယ်ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ဒါနဲ့ စကား အတင်းစပ်။
မမော် ထွက်သမျှ အခွေဟောင်းတွေကို စီဒီ ဘန်းထားတဲ့ သူလေးများရှိရင် သများကို ဆက်သွယ်ပါလို့။
နစ် မနာ (အဲ) မနစ်နာ စေရပါဘူးလို့။
အော် စင်္ကာပူက အစ်မကြီးလားခင်ဗျ…။
တင်ဇာမော်ရဲ့ ထွက်သမျှ သီချင်းတွေ လိုချင်တာပေါ့နော်…။
MP3 လိုချင်တာလား ခင်ဗျ…။
နစ် မနာ ဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော် မျိုးကြီး ရှာဖွေ ပေးအပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
Mr. MarGa says: ဟေ့လူရီး
ဆောင်း မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ
ဆောင်း က ဆောင်းရာသီ၊ ထီးဆောင်း၊ သိုးဆောင်း ကို ပြောပြီးတော့
စောင်း က စောင်းတူရိယာ၊ ခပ်စောင်းစောင်း၊ စောင်းမြောင်း တွေမှာ သုံးသလေ
သတ်ပုံ အထူး ဂရုစိုက်ရန်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမာဃ ရေ…။
ကျွန်တော် မှား သွားပါတယ်ခင်ဗျ…။
သတ်ပုံကို အမြဲဂရုစိုက်ရင်းက မှားသွားတာပါခင်ဗျ…။
အခုလို ပိုစ်ကို သေချာဖတ်ပြီးတော့
သတ်ပုံ စစ်ပေးသွားတဲ့ ကိုမာဃ ကိုလည်း
ဒီနေ့မနက် လမ်းတွေပိတ်ထားပြန်ပြီ စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ
ကလေးတွေ စာမေးပွဲချိန်ကလည်း နီးနေပြီပေါ့နော်…။
မြို့တော်ဝန်ကြီးကို ကျွန်တော် ဖုန်းလှမ်းဆက်ပေးလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျ…။
Crystalline says: တင်ဇာမော်အခွေတော့ ဝယ်အူးမှာ… သူ့ live show တုန်းကလည်း… သများခိုက်တဲ့ တေးရေးရဲ့သီချင်းတွေပါလို့… ဝိုင်းစုက ပင်ကိုယ်သံသင့်ရုံ…. အဆိုပညာ… အသံရိန်းခ်ျလည်းတကယ့်သာမာန်… မုဒ်လေးကောင်းတာတစ်ခုအားသာပြီး… အရမ်းအောင်မြင်သွားတယ်…. တကယ့် live ကျရင်… တကယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်… စိတ်ဝင်စားစရာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အော်…အော်စီက အစ်မကြီးလား ခင်ဗျာ…။
အစ်မကြီးအနေနဲ့ တင်ဇာမော်ကို ကြိုက်တယ်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်…။
အစ်မကြီးသူငယ်ချင်း စင်္ကာပူက ဇီဇီခင်ဇော်ကလည်း တင်ဇာမော် ခရေဇီပဲတဲ့ခင်ဗျ…။
ကာရာအိုကေ သွားရင် တင်ဇာမော်ရဲ့ ချစ်သူ့မောင် သီချင်းကို မျက်စိမှိတ်ဆိုနိုင်တာတဲ့ဗျာ…။
၀ိုင်းစု…ကိုလည်း အစ်မကြီးက စိတ်ဝင်စားတယ်လား…။
အစ်မကြီး သုံးသပ်ပြသွားတာများ အိပ်မက်ဆုံရာ မှာ ဒိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့
ရေဗက္ကာဝင်း အတိုင်းပဲ ဗျို့…။
အစ်မကြီးကလည်း ဂီတ လောကနဲ့ မစိမ်းဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အခုလို ဖုန်းဆက်သွားတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မကြီးခင်ဗျ…။
ကူမားရ် says: ကျော်ခေါ်တာ မကိုင် ဝူး
အော်…ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသား ကြီး ကူမားရ် လား…။
ဒံပေါက်ချက်တဲ့ ကူမားရ် လားခင်ဗျာ…။
အနှိပ်ခန်းမှာ ပျော်မွေ့နေသော စောကူမားရ် ပေါ့နော်…။
ဘယ့်နှယ့် နာမည်ကြီးလဲ ခင်ဗျ…။
စောကူမားရ် လို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တာလား…။
ဟုတ်ကဲ့ပါ စောကူမားရ် ရေ…။
အော်ပရေတာ ကြီးက ဘယ်သူခေါ်ခေါ် ကိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
နောက်ပို့စ်ကျရင် ဒီပို့စ်ထဲ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးသူတွေ အတွက်
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ စောကူမားရ် ရယ်…။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဓာတ်ရှင်မင်းသားထဲမှာ (ဦး)ကျော်သူ ကို အစကမကြိုက် …
ရုပ်ကလေးပြစားတဲ့ မင်းသားလို့မှတ်ထားရာကနေ …
နောက်ပိုင်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ နှစ်သက်လာတာ…
အခု ဓာတ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ … ဘဲထီးဂွဒ်ပေါ့ ကိုကိုဘလက်ရယ်…
ဟောင်ကောင် က အတိသယ၀ုတ္တိ ကိုကိုလားခင်ဗျာ…။
ချစ်ဇနီးခွန့်ကျွေးတဲ့ မုန့်တီသုတ် ဆိုပြီး Facebook ပေါ် တက်ကြွားတဲ့ ကိုကိုလားဟင်…။
ကျော်သူ ကြီးတစ်ယောက် ရုပ်ရှင်လောကထဲ ပြန်ဝင်ပြီး
သူ့ကားတွေ ထွက်လာရင် အားပေးပါဦး ဗျာ…။
Kaung Kin Pyar says: ဦးကျော်သူရယ် ဦးစိုးသူရယ် စံရတီမိုးမြင့်ရယ်နဲ့ ဓာတ်ရှင်ရိုက်မတဲ့…..
ဟိုမင်းသားကြီး နှစ်ပါးကတော့ ဒါဟာ သူရို့ဘွရဲ့ နောက်ဆုံးကားပါလို့…အလုပ်သတင်းရပ်ကွက်က ကြားဘာဒယ်..
စံရတီလေးကလဲ သူမဘွမှာ တစ်ခါမှအတူတွဲပြီး သရုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ မင်းသား နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဓာတ်ရှင်ရိုက်ရမှာမို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေဘာဂျောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်ဟူလို…
Mike says: .ကလင် ကလင် ကလင်
.ဟဲလို အော်ပရေတာလေး ကိုကို ဘလက်ချောလားခီည
.BREAKING NEWS: (မြန်မာစံတော်ချိန် ၂ နာရီ)
“အခြေအနေကတော့ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာပဲဗျ။ သေနတ်တွေနဲ့ ကျောင်းထဲဝင်စီးပြီးတော့ ဖမ်းနေတယ်၊ အကုန်လုံးအကုန်လုံး။ သူတို့အဖမ်းတော့ခံရတော့မှာပေါ့ တအားဝိုင်းထားတာ အထပ်ထပ်ဝိုင်းထားတာ’
ကျောင်းသားသပိတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို
ရန်ကုန်အထိ ချီတက်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီဆိုပြီး တချို့က
Facebook ပေါ်မှာ အောင်ပွဲတောင်ခံနေကြပြီ ခင်ဗျ…။
ကျွန်တော်တို့လည်း အကျပ်အတည်းကြီးတစ်ခု ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းသွားပြီဆိုပြီး
ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ဖြင့် ရွာထဲမှာ ဒီထက်ပိုမပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျ…။
ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့…ကျောင်းသားသပိတ် သတင်းလေးပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…။
နားစွန်နားဖျားကြားရသလောက် ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ကျော်သူ၊ ရန်အောင်၊ မင်းဦး၊ စိုးသူ (သို့မဟုတ်) ရဲအောင် တို့
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ခင်ဗျ…။
မင်းသမီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ…။
မမကောင်းကင်ပြာပြောသလို စံရတီမိုးမြင့် ပဲ ဖြစ်မှာပါခင်ဗျ…။
ပထမအကြိမ် ရိုက်ကူးခဲ့တုန်းက ကျော်ဟိန်း၊ ကျော်သူ၊ ရဲမင်းပိုင်၊ သီဟတင်စိုး
န၀ရတ် နဲ့ ဂန္တ၀င် တို့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာ ခင်ဗျ…။
သူတို့ဘ၀ ရဲ့ နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့
ငွေရဖို့ သက်သက် ငွေရဖို့သက်သက် ဖျော်ဖြေရေးကားတွေကိုတော့
အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပရိသတ်ကို အကျိုးပြုမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်မယ်၊
ဘဘဦးသုခ ရိုက်ခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားက ပရိသတ်အတွက်
အကျိုးပြု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမယ်ဆိုရင် လက်ခံစဉ်းစားမှာပါ
ဦးဝင်ငြိမ်း အမေးကို ကျော်သူဖြေသွားတာလေး ပါ…။
ဒီကားက ကျော်သူ့အတွက် နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်တော့
Kaung Kin Pyar says: ဒါဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပါပဲ ဦးဘလက်ရေ….။
ကျော်သူက ကောင်းကင်ပြာကြိုက်ရတဲ့ မင်းသားကြီးတစ်ဦးပဲဆိုတော့…..
weiwei says: မနေ့ကထဲက ဖတ်ချင်နေတာ log in ၀င်မရလို့ အခု လိုင်းရတုန်းလေး ကမန်းကတန်း ၀င်ဖတ်သွားပါတယ်လို့ ..
နောက်ဆို သိချင်တာရှိရင် ဖုန်းဆက်မေးမယ်နော် ..
STRESS တွေ များနေတဲ့ ကြားက…၊
ပေးသွားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးမို့ အစိမ်းခြယ်ပေးလိုက်ရပါကြောင်း…။
naywoon ni says: ဒီ​နေ့ လှည်းတန်းမှာ ဘာ​တွေ ဖြစ်​ကုန်​​သေးသလဲဗျို့
​အော်​ပ​ရေတာဂျီး အဲ့ဘက်​မ​ရောက်​ဖူးလား ဂျ
လှည်းတန်းမှာ ဖြစ်တဲ့ သတင်းကို
ကမာရွတ်မီဒီယာ မှာ ဖေါ်ပြထားတာက…။
နေ့လည်၂နာရီခွဲခန့်က ကျောင်းသား အယောက်၁၀၀ ခန့်ဟာ စိန်ဂေဟာရှေ့ကစတင်လမ်းလျောက်ပြီး ပြည်လမ်း
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့အင်အား ၅၀၀ ခန့်ကပိတ်ဆို့တားဆီခဲ့ကာ
အော်ဟစ် တောင်းဆိုမှုကြောင့် ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကာ ဆန္ဒပြပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
မြစပဲရိုး says: ဟဲလို ဟဲလို အော်ပရေတာကြီး
အဲဒီ ပွဲ မှာ ကလေး တွေ ကိုင် ထားတဲ့ အဝိုင်းထဲ မှာ A ထည့်ထား တဲ့ image နဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ကို သိချင် ဇော နဲ့ ဂူးဂဲလ် ထဲ ရှာကြည့်ပါတယ်။
ဘာသွားတွေ့လဲ ဆိုတော့ Anarchism ဆိုတဲ့ စကားလုံး ရဲ့ ကိုယ်စားပြု ဖြစ်နေတာ တွေ့ တယ်။
anarchy – ˈanəki/ noun
antonyms:	government, order
ကောင်းတဲ့ ဘက် က ကြည့်ရင်တော့ “”Law and Freedom without Force”
မကောင်းတာဆိုရင် မင်းမဲ့ ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒီ
မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် လဲ သက်ရောက်နိုင်တဲ့ image ကို ဘယ်သူက တွန်းပြီး ကိုင်ခိုင်း ပြန်တယ် မသိ။
ဒီတော့ ဘာကို ပြေးပြီး သတိရလိုက်မိတယ် မှတ်လဲ။
ဒီကျောင်းသားသပိတ် မစ ခင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲ ကို တောင်ဝင်ပြီး ပညာရေးဥပဒေပြင်ဖို့ ဆန္ဒပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ Guy Fawkes mask တွေ နဲ့ Anonymous ကိုယ်တော်လေးများ ကိုပါ။
တော်ရုံ ပါဝါ နဲ့ ကျောင်းထဲဝင်သောင်းကျန်းလို့ မရတာ အားလုံး သိပါတယ်နော်။
kai says: အဲဒါသိချင်နေတာ.. သိရလို့ကျေးကျေး…။
ဗေလုဝ…”စောင်းမှန်းနတ်မှန်းမသိ..။” “စောက်မှန်း ကမ်းမှန်း” မသိနေရာမှာ အစားထိုးသုံးလို့ရ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အရင် မှတ်ချက် တွေ ဖတ်ပြီး မှတ်ချက် ပြန်ပေးပြီး မှ စာ ကို ဖတ်မိတယ်။
တစ်နေ့လုံး စိတ်တွေ ထုံ နေတာ အခုမှ ပြုံးနိုင်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ ကဘချော ရယ်။
(၁) တင်ဇာမော် ထက် အေးချမ်းမေ နဲ့ ပိုတူ ပါတယ် ဆိုမှ။
(၂) စောစောကဘဲ မစ္စတာ မောင်မောင်ကျော်သူ ရဲ့ “အမေ့” တ ချင်း စာစု ကို ဖွဘုတ် ထဲ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
အဲဒီ အမေ့ မှာလဲ ရင်ထဲ ချိမှာ မဟုတ်ပါလေ။
အချိန်မရောက်သေးသမျှတော့ စိတ်ရှည်ပေးတော်မူကြပါ လို့ ဘဲ ကုန်းအော်လိုက်ချင်တယ်။
(၃) ၀ိုင်းစု ရဲ့ ချစ်ဦးပုံပြင် သီချင်းသိဘူး။
ဟေမာ့ ရဲ့ “ပထမ အသည်းကွဲဇာတ်လမ်း” ဘဲ သိတယ်။
ထူးအိမ်သင် ပြန်ဆိုတာ ကို ကြိုက်ဘူး။
ဟေမာ့ ကို ပိုကြိုက်တယ်။
(၄) မွန်းအောင် ကတော့ ကိုယ့် ဖေ:ဘရိတ်မဟုတ်။
(၅) ဒီလောက် ကားတွေ မှောက်တာ အကြိမ်ကြိမ် မဆန်းနိုင် အောင်ဖြစ်နေတာ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများ မရှိရအောင် ရှားပါးနေလားကွယ်။
(၆) ကိုလှဆွေ ရဲ့ စိတ်တွက် သချာင်္ အကြောင်းဘဲ သိတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပေသီး တွက်စက်လေး ဆောင်ထား လို့ ပြောပေးပါ။
ကျွန်တော့်ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးမိသွားတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော့် ရည်မှန်းချက် ပြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူး အထူး…အထူး…အထူး
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟိဟိ ဘူးလက်ကတော့ ဗဟုသုတတခုတိုးသွားတာမို့ အဆဲခံရတာတန်သွားတယ် ပြောရမယ်အော်ပရေတာကြီးရေ။ အဲ့နောက်တခါမှဖုန်းဆက်ပြီး မော်ဒယ်လေးအသတ်ခံရမှု့နဲ့ မင်းအုပ်ဆိုးဂွင်းလုံးပုံ အဲ့ဂွင်းလုံးကျွတ်နိုင်ဖွယ်လေး သတင်းပေးတော့မယ်။
ခင်ဇော် says: မင်းအုပ်စိုး ဂွင်းလုံးကျွတ် တာ ကြာပြီမလား ယောက်ခမွ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခုဟာက တနှစ်ပဲတဲ့တော့ ချုပ်ရက်နဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ ဂွင်းလုံးကျွတ်လုနီးပါး ငွေများတရားနိုင်
မင်းအုပ်စိုး သတင်းကို တစ်နိုင်ငံလုံးက
အမိန့်တော့ မချသေးဘူး မဟုတ်လား…။
မအားတဲ့ကြားက အချိန်လုပြီး ၀င်ပေးသွားတဲ့
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟုတ်တရားတော့မဝင်သေးပေမဲ့နှစ်မှု့လုံးသတင်းကတော့ထွက်နေတယ်။ မော်ဒယ်လေးအမှု့ကလဲ လူသေမှု့ပြောင်းပြီး သေဆုံးသူရဲ့ဒါးဖြစ်သွားဆိုလား။ မြန်မာ့ ဥပဒေလောက ကမျက်လှည့်ပညာရပ်တလေ့လာလိုက်စားနေဆိုလား လား လား လား လား လား
တောင်ပေါ်သား says: ဒီမယ် အော်ပရေတာကြီး
မြစ်ကြီးနားမှာ ဖမ်းထားတဲ့ သစ်သူခိုး မအေယိုးတရုတ် တစ်ရာကျော် လွှတ်လိုက်တယ် ဆို
ကချင် ဆရာမ ၂ ယောက် အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စကကော ငါးလောင်းပြိုင်လို အမေ့ခံလူသတ်မှုဖြစ်သွားပြီလား
ခီညား နားစွန်နားဖျား မဟုတ်ပဲ နယ်စွန်နယ်ဖျားအထိ သွားစုံစမ်းစေချင်တယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အဲဒီ အမှုတွေကတော့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဖေါ်မှ
လာသမျှ ဖုန်း ထိုင်ဖြေနေရသူမို့ နယ်စွန်နယ်ဖျားကိုတော့
Alinsett@Maung Thura says: ဒီရေးဟန်က တမျိုးပဲ ဖတ်ရတာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်
ထင်တာတော့ အရမ်းးးး ရို့ကျိုးသိမ်မွေ့ ချွဲနွဲ့နေသလားလို့
စကားလုံးတွေ သုံးထားတာက တရစပ်ဖတ်တော့ တမျိုးကြီးးးး
အဲ ဘာလျှော့ရမလဲ တခုခုတော့ လျှော့ရမယ်ထင်တယ်
အမြန်လမ်း သတင်းတွေ ထပ်ထပ်ကြားပြီးးး
အမြန်လမ်းက ခရီးသွားရမှာတောင် ကြောက်လာမိ
ရိုက်ချလိုက်တာဆိုတော့ လျှော့ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
ဦးဦးပါလေရာ says: .အမြန်လမ်းကတော့…
.ကိုယ်စမောင်းတုန်းက ကီလို၁၂၀ လောက်
.နောက်တော့ ကီလို ၁၀၀ လောက်
.အခုတော့ ကီလို ၈၀ လောက် ပဲ မောင်းရဲတော့တယ်…
.လမ်းပေါ်မောင်းကြတဲ့ကားတွေကသာ ဆိုး ဆိုး လာတာ…
မတော်တဆဖြစ်ရင် အရှိန်တွေက အရမ်းအရမ်းဆိုတော့
ကီလို ၈၀ လောက်က အတော်ပါပဲ ခင်ဗျာ…။
အခုလို မအားလပ်တဲ့ကြားက ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ
မနက်ဖြန် လဖက်ရေ သောက်ကြဦးစို့…။
ဦးကြောင်ကြီး says: အောပလိပ်တာ၈ျီး.. လက်ပံတန်း ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲ နှိမ်နင်းတာ ရဲ၁၆ယောက် ဒဏ်ရာရသွားလို့ အုယဲထွတ်က ပြောသဗျာ.. လုပ်ပါဦး..
Alinsett@Maung Thura says: အုယဲထွတ်က
ဗုံဗုံ says: ရိုက်ရပြီးရောဆိုပြီးရိုက်တာ…
သူတို့အချင်းချင်း ပြန်ရိုက်မိလို့ ရတာနေမှာပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ရဲတွေခင်ဗျာလည်း အင်အားကနည်းတယ်မဟုတ်လား ဗျာ…။
၁၆ ယောက် ဆိုတာ လျှော့ပြောထားတာ ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ…။
အမှန်တကယ် ဒဏ်ရာရသူက ၁၀၀ လောက်ရှိမှာပါခင်ဗျာ…။
ဦးသိန်းစိန်ကြီးကတော့ သနားစရာ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ…။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တကယ့်အော်ပရေတာကြီးလိုပဲ
ဆိုတဲ့ မြည်သံစွဲစာလုံးအကြီးကြီးတွေကလဲ တကယ့်ဖုန်းသံလိုပဲ
တကယ် ချီးကျူးနေသလိုကြီး ဖြစ်နေပြီ…။